Hoyga - Wararka Dugsiga Hadda: Warka Dugsiga ee Hadda
DUGSIYADA CAALAMIGA AH
Deeqaha Facebook ee ardayda reer Nigeria: Facebook waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee baraha bulshada ee ay dadku kula kulmaan kuwa ay yaqaanaan / ay rabaan inay ogaadaan. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo inay tahay madal lagu sheekeysto, sidoo kale waa madal lagu xayeysiiyo ganacsiyada. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waa barxad bixisa deeqo waxbarasho oo afka laga siiyo ardayda. Waxay u egtahay mid la yaab leh, sax? Haa ee […]
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Dibedda loogu talagalay Ardayda Nigerian 2021 Liiska Codsiga
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay dibedda loogu talagalay Ardayda Nigerian: Ma ogtahay inay jiraan faa'iidooyin la xiriira ahaanshaha Nigerian? Iyo in qaar ka mid ah faa'iidooyinkan ay ka muuqdaan tacliin ahaan qaab deeq waxbarasho oo dibadda ah wax looga barto? Waa inaad tan ogaataa. Sidoo kale, deeqdan waxbarasho waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha dhaqaale ee ardayda reer Nigeria. Si kastaba ha noqotee, in kastoo kuwan […]
Bartilmaameedka Codsiga deeqda waxbarasho ee kulliyadaha iskuulka.org 2021 Cusboonaysiinta
Codsiga deeqda waxbarasho ee Bartilmaameedka: Hay'ada Bartilmaameedka waxay siisaa tiro deeqo waxbarasho iyo fursado deeq ah ardayda. Si kastaba ha noqotee, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha u-qalmitaanka. Intaa waxaa sii dheer, la-hawlgalayaasha deeq-waxbarasho ee Bartilmaameedka waxay la-hawlgalayaan ururro kale sidii loo abuuri lahaa abaalmarinno maaliyadeed oo dheeri ah. Marka, ardaydu waxay ka heli karaan deeqdan waxbarasho khadka tooska ah ee bilaashka ah. Si kastaba ha noqotee, inaad waxbadan ka ogaato deeqdan waxbarasho iyo u qalmideeda […]
Microsoft Disability Scholarship 2021/2022 Cusboonaysiinta Xariirka Codsiga
Deeqda Naafada ee Microsoft: Deeqdani waa deeq waxbarasho oo loogu talagalay in lagu caawiyo kuwa naafada ah. Sidaa darteed, haddii aad qabtid nooc kasta oo iin ah waa inaad u qaadataa macluumaadkan si dhab ah. Akhriso qodobkaan si aad waxbadan uga ogaato deeqdan waxbarasho ee naafonimada Microsoft. I aamin, waad ku farxi doontaa inaad sameysay. Ujeeddooyinka deeqda waxbarasho ee naafada ee Microsoft […]
Deeq waxbarasho oo aad loo maalgeliyo 2021 oo loogu talagalay Xariirka Foomka Ardayda Caalamiga ah
Deeqaha waxbarasho ee aadka loo maalgeliyo: Sida arday caalami ah waxaa jira deeqo badan oo waxbarasho oo aad ka heli karto. Si kastaba ha noqotee, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad buuxiso shuruudaha oo aad dalbato. Qodobkaan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan qaar ka mid ah qodobadan. Sidoo kale, waa inaad ka akhridaa sida iyo meelaha laga helo. Sidaas darteed, noqo […]
Online MPH Deeqaha loogu talagalay Wadamada Soo koraya 2021 Xariirka Foomka
Deeqda waxbarasho ee MPH ee loogu talagalay Wadamada Soo koraya: Miyaad dooneysaa inaad ka kasbato Masters Masters ee Sayniska Caafimaadka Bulshada Jaamacadda Suffolk iyada oo loo marayo UNICAF? Hadday haa tahay, markaa deeqdan waxbarasho adigaa iska leh. Sidoo kale, deeqdani waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso kaalmo dhaqaale riyadaada. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim inaad fiiro gaar ah u leedahay […]
Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Harvard 2021/2022 Updates Portal Application
Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Harvard 2021: Ma waxaad tahay arday rajeynaya inaad wax ka barato Harvard? Ma rabtaa deeq waxbarasho inaad wax ku barato Harvard? Mise, Harvard waa iskuulka aad ku riyooto laakiin ma awoodid? Waxaan hayaa macluumaad laga yaabo inaad xiiseyneyso. Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Harvard ee sanadka 2021 way furantahay. Maqaalkani wuxuu ku siinayaa […]
Deeqaha ICCR ee ardayda Bangladesh: Halkan waxaa ku yaal wax xiiso u leh ardayda Bangladesh. Waxaa jira deeq waxbarasho adiga. Tan waxaa bixiya Golaha Xiriirka Dhaqanka ee Hindiya (ICCR). Si taxaddar leh u akhri faahfaahin buuxda. Ardayda Bangladesh waxay dalban karaan deeqda waxbarasho ee ICCR 2021. Qodobadani waxay ku siinayaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato. […]
Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Eeg Xariirka Cusboonaysiinta Codsiga
Apple WWDC Scholarship: Iyada oo ah habka lagu qadariyo macaamiisheeda, Apple waxay siineysaa deeq waxbarasho ardayda. Sidoo kale, deeqdani waa inay ka caawiso ardayda caqabadda dhaqaale si ay u sii wataan waxbarashadooda. Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsanayaa dhisidda awooda iyo horumarinta ilaha aadanaha. Sidan oo kale, waa muhiim inaad siiso isku day. Ma lihid wax aad to
Deeqda Dawlada Dhexe ee Ardayda Nigerian 2021 Xariirka Codsiga
Deeqaha Dawlada Dhexe ee loogu talagalay Ardayda Nigerian: Markaad tahay arday ka socda wadamada Barwaaqo-sooranka waxaa jira fursado deeq waxbarasho oo aad ka faa'iideysan karto. Marka, sida arday reer Nayjeeriya ah (dowlad wadaag ah), waad ka faa'iideysan kartaa deeqdan waxbarasho sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, in kastoo ay jiraan shuruudo, maqaalkani wuxuu ku siinayaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida loo dalbado qaar ka mid ah. […]
Haryana Deeqaha 2021/2022 Portal Codsiga haryana.gov.in
Sida arday ka socda gobolka Haryana deeqda waxbarasho ee Haryana 2021 ayaa adiga kuu ah halkan. Waa fursad waxbarasho oo bilaash ah oo la kabay. Deeqda waxbarasho ee Haryana 2021 ayaa adiga fursad weyn kuu ah. Fadlan la soco macluumaadkan muhiimka ah. Gobolka Haryana waxay siisay tiro wanaagsan oo deeq waxbarasho ah. Waxay daboolayaan kalfadhiga 2021/2022. Maqaalkan […]
7 Ugufiican Waxaan Rabaa Inaan Dibedda Ugu Barto Deeqo Bilaash Ah 2021/2022 Portal
Waxaan rabaa in aan dibadda ku barto deeq waxbarasho oo bilaash ah: Wax ku barashada dibedda waxay ahayd riyada arday badan. Si kastaba ha noqotee, kharashka badan ee waxbarashada ayaa inta badan u muuqda riyadan. Laakiin ka waran haddii kuu sheego inay jirto wado? Sidoo kale, ka waran haddii kuu sheego weli rajo ayaa jirta inaad wax ku barato dibadda si bilaash ah, ma rumaysan lahayd? Ii oggolow […]
17 deeqaha injineernimada si buuxda loo maalgeliyo: Waxbarashada iyo macluumaadka ay sheegaan inay yihiin awood. Waa wax fiican inaan ka wada hadli doonno qodobkan. Qodobkaan, waxaa jira macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qaar ka mid ah deeqaha injineernimada oo si buuxda loo maalgeliyo. Sidaa darteed, haddii aad raadineysay deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda injineernimada, fadlan akhri. 17 Ugu Fiican […]
Barashada Jarmalka Deeq waxbarasho oo dhammaystiran: Jarmalka gudaheeda, waxbarashadu way fududahay. Waxaa jira deeqo waxbarasho oo taas ka dhigaysa mid suurtagal ah. Sidoo kale, qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho waxay la yimaadaan xirmooyin yaab leh. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad wax badan ka barato deeqdan waxbarasho, fiiro gaar ah u yeelo macluumaadka ku jira qodobkan. Qodobkaan, waxaad ku baran doontaa meesha / sida loo dalbado […]
Deeq waxbarasho oo ku saleysan SAT Dhibcaha 2021/2022 Cusboonaysiinta Xariirka Codsiga
Deeqaha ku saleysan Dhibcaha SAT: Arday ahaan raadinaya deeq waxbarasho, fadlan dhageyso. Waxaa jira deeqo waxbarasho oo aad kuheli karto iyada oo ku saleysan dhibcahaaga SAT. Si loo yiraahdo ereyada, deeqaha waxbarasho waxay dalbanayaan inaad leedahay dhibco gaar ah SAT. Markaa, waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo dhibcaha SAT sare iyo heer sare. Hadaad rabto inaad waxbadan maqasho, […]
DARYEELAYAASHA & FURSADAHA
Musharax Fenix ​​International Shortlisted Musharax 2021/2022 PDF List Download
Musharrixiinta Liiska Gaaban ee Fenix ​​International 2021 waa la baxay: Fenix ​​Qorista Caalamiga ah Magacyada murashaxiinta liisaska ayaa la soo saaray. Ma ka codsatay Fenix ​​International 2021 arjiga bogga rasmiga ah www.fenixintl.com? Markaa waxaa suuragal ah inaad isweydiiso sidaad u hubin laheyd Musharaxa Fenix ​​International Shortlisted 2021. Inaan ka walwalin waxyaabahaas oo dhan waxaa laga heli karaa […]
Filed in Job by Tifaftirayaasha TMLT Juun 18, 2021
Hada Ka Codso Shaqada UNDP ee Abuja Kaaliyaha Barnaamijka ee 2021
Hada Ka Codso Shaqada UNDP ee Abuja 2021: Ma shaqo baad ka dooneysaa Nigeria 2021? Ma jeceshahay inaad ka shaqeyso UNDP? Sidoo kale, dhib malahan haddii aan kugu hagno sidaad u codsan karto shaqooyinka UNDP qorista ee Nigeria iyo wixii ka baxsan? Hadday haa tahay, ka dib sii wad akhriska. Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay […]
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka Juun 18, 2021	• 0 Comments
Fursadaha Xirfadaha ee PricewaterhouseCoopers (PWC) Cusboonaysiinta 2021
Fursadaha Xirfadaha ee PricewaterhouseCoopers (PWC): PricewaterhouseCooper waxay shaqaalaysiinaysaa dhowr shaqooyin. Musharaxa ugufiican waa inuu haystaa Shahaadada Bachelor-ka shaqada ama qaybaha laxiriira. PwC waxay ka caawisaa abaabulka iyo shaqsiyaadka inay abuuraan qiimaha ay raadinayaan. Waxaan nahay shabakad ka kooban shirkadaha 158 dal oo in ka badan 180,000 oo qof ay ka go'an tahay inay keenaan tayo […]
Qiimeynta Shaqaalaha Kaaliyaha Maamulka ee Qiimeynta 'WaterwaterhouseCooper' (PwC) 2021: PricewaterhouseCooper waxay u qoreysaa Kaaliyeyaasha Maamulka. Musharaxa ugu habboon waa inuu haystaa Shahaadada Bachelor-ka ee Xisaabaadka, Maaliyadda, Dhaqaalaha, Tirakoobka, Sharciga ama dhinacyada la xiriira. PwC waxay ka caawisaa abaabulka iyo shaqsiyaadka inay abuuraan qiimaha ay raadinayaan. Waxaan nahay shabakad shirkado ka shaqeeya 158 dal oo leh in ka badan 180,000 oo qof […]
Qorista PricewaterhouseCooper ee kuxigeenka Maareeyaha Maareynta: PricewaterhouseCooper waxay qoreysaa kuxigeenka Maareeyaha Maareeyaha. Musharaxa ugufiican waa inuu lahaadaa uguyaraan 5 sano oo khibrad ah shirkad caan ku ah Bangiga Maalgashiga. PricewaterhouseCooper (PwC) - Macaamiilkeena qeybta Bangiyada Maalgashiga wuxuu raadinayaa inuu buuxiyo doorka hoos ku xusan: Magaca Shaqada: Ku-xigeenka Agaasimaha Tixraaca Maareeyaha Maareeyaha: 130-PEO00859 […]
Filed in Job by TMLTStaff Juun 18, 2021	• 0 Comments
Hada Ka Codso Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firfircoonida Gudaha) 2021: PricewaterhouseCooper waxay u shaqaalaysiineysaa Dhaqaaleyahanno Yaryar Musharaxa ugu habboon waa inuu haystaa ugu yaraan Shahaadada Bachelor-ka ee Ingiriisiga, Xisaabta, Sayniska Bulshada ama anshaxa dhaqaalaha. Shirkadaha PwC waxay ka caawiyaan ururada iyo shakhsiyaadka inay abuuraan qiimaha ay raadinayaan. Waxaan nahay shabakad ka kooban shirkadaha 158 […]
Ka Codso Hada Qorista Socoda ee PricewaterhouseCooper (PwC) 2021: PricewaterhouseCooper waxay qoreysaa Kaaliyeyaasha Maamulka. Musharaxa ugufiican waa inuu haystaa Shahaadada Bachelor-ka shaqada ama qaybaha laxiriira. PricewaterhouseCooper (PwC) - Macaamiilkeenna, waa shirkad la aqoonsan yahay oo ISO 9001 ah: 2008 oo bixinaysa Adeegga Kormeerka, Tababbarka iyo Xadhigga Xarumaha Saliidda iyo Gaaska, Badaha iyo Warshadaha. […]
Ma rabtaa inaad hesho MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka? Teknoolojiyadda warfaafinta ayaa udub dhexaad u ahayd dib-u-qeexidda waxa loola jeedo in la shaqeeyo, in si fiican loo shaqeeyo, wax soo saar la sameeyo, iyo in la bixiyo adeeg qiimo leh. Waxay bartaa ardayda sida loo maareeyo mashaariicda loona maareeyo kooxaha barnaamijyada. Akhriso si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. An MBA […]
Tusaalooyinka Satire Essay Tusaalooyinka 2021 S Tilmaamaha Qormada Cilmiga Dhameystiran
Qormooyinka oo dhan looma jeedin inay u muuqdaan kuwo culus oo mamnuucaya. Mararka qaarkood, qormooyinku waxay noqon karaan kuwo xiiso leh in la akhriyo. Maqaalka qosolka ahi waa mid ka mid ah tusaalaha ugu wanaagsan ee qormada madaddaalada badan. Maqaalkan, waxaan kugu hagi doonnaa adiga oo qoraya qormooyin qosol leh; iyo sidoo kale inaan ku siiyo qaar ka mid ah qosolka ugu fiican […]
Qormada xallinta dhibaatooyinka waa nooc caan ah oo qancin ah. Qormooyinkan, waa inaad ku sifeysaa dhibaato, aqristaha uga dhaadhicisaa inuu daryeelo dhibaatada, soo jeediyo xalka, una diyaar garowdo inaad baabi’iso wixii diidmo ah. Tani iyo qaar kaloo badan oo lamid ah tilmaamaha tallaabo-tallaabo, waxaan kugula socodsiin doonaa koorsada maqaalkan. Ha […]
Hoos waxaa ku yaal liiska shaqooyinka ugu mushaharka badan ardayda ka qalin jabisay Ameerika. Sida lagu sheegay warbixintii ugu dambaysay ee Glassdoor.com, dhakhaatiirta iyo waaxda qareenada ayaa wali ah xirfadlayaasha ugu dakhliga badan qaranka. Marka lagu qiimeeyo tan, shaqooyinka caafimaadka iyo sharciga waxay umuuqdaan kuwa dhaqaale ahaan faa iido badan leh. Faahfaahin ka raadi hoos. Si loo soo ururiyo liistadeeda Bixinta ugu Fiican […]
Filed in Education by Shaqaalaha tifaftirka Juun 18, 2021	• 1 Comment
Qodobkaan waxaad ku arki doontaa tusaalooyinka mawduucyada qormada qiimaynta. Qormadan waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo tayada guud ee shay gaar ah. Waxay noqon kartaa shay, adeeg, wax soo saar, iyo meel. Si kastaba ha noqotee, muujinta aragtida qofka kuma filna. Qoraaga waxaa laga filayaa inuu sameeyo baaritaan dhameystiran oo ku saabsan mowduuca. Isaga / iyadu waa inay…
Heerka Ogolaanshaha Jaamacada Richmond iyo Shuruudaha Ogolaanshaha 2021
Heerka aqbalaadda Jaamacadda Richmond waa qayb ka mid ah macluumaadka loogu talagalay farahaaga haddii aad damacsan tahay inaad isqorto mid ka mid ah barnaamijyada Jaamacadda Richmond. Marka akhri waxyaabaha ku qoran boggan si diin ah si aad isugu hubiso macluumaad kugu filan. Maxay Tahay Inaad Ka Ogaato Jaamacada Richmond University ee ardayda Richmond way cadaan kartaa…
WARARKA DUGSIGA HADDA
Xariirka Dib-u-habeynta Unilorin www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php Cusbooneysiintii ugu dambeysay
Xariirka Dib-u-habeynta Unilorin: Tani waa in la ogeysiiyo dhammaan ardayda da'da ah iyo kuwa rajada leh in bogga dib-u-hagaajinta Jaamacadda Ilorin uu socdo oo socdo. Boggan wuxuu fikrad kaa siin doonaa waxa laga filan karo bogga. Sidoo kale, waxay kugu hagi doontaa sida loo galo bogga lagana cusbooneysiiyo marka liiska gelitaanka […]
Xariirka Ardayda AAUA www.aaua.edu.ng/b/student/ Cusboonaysiinta Codsiga ee Ugu Dambeeyay
Xariirka Ardayda AAUA: Awoodda Jaamacadda Adekunle Ajasin ayaa u suuragelisay bogga ardayga. Bogganina waa inuu u fududeeyo nashaadaadka tacliinta ardayda. AAUA waa dowlad goboleed ay iska leedahay oo maamusho jaamacad Nigeria ku taal. Si kastaba ha noqotee, sii wad aqrinta maqaalkan si aad waxbadan uga barato. Laakiin marka hore, maxaad ka taqaannaa Jaamacadda Adekunle Ajasin (AAUA)? […]
Galitaanka Xariirka Ardayda OAU: Awoodda OAU waxay awood u siisay bogga ardayda. Iyo boggan wuxuu siiyaa dhammaan ardayda mustaqbalka mustaqbalka macluumaadka ku saabsan geeddi-socodka gelitaanka hay'adda. Sidoo kale, boggan, ardayda cusub iyo ardayda soo noqonaysa waxaa la siin doonaa ku dhowaad wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay waxbarashadooda ugu fududaato uguna fiicnaato hay'adda. Obafemi Awolowo University (OAU) Obafemi […]
BIU Portal www.biu.edu.ng/ Hubi Cusboonaysiinta Codsiga Ugu Dambeeya 2021
Xariirka BIU: Awoodda Jaamacadda Benson Idahosa ayaa awood u siisay bogga ardayda. Marka, arday ahaan ama arday mustaqbalka u noqon kara dugsiga, macluumaadkan waa inuu ku xiiseeyaa. Sidoo kale, qodobkan, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan sida loo galo bogga BIU. Laakiin marka hore, ka hor intaadan u quusin taas, maxaad ka ogtahay […]
Xariirka Ardayda FUNAAB www.unaab.edu.ng/ Hubi Xariirka Arjiga ee Ugu Dambeeyay
Xariirka Ardayda FUNAAB: Haddii aad raadineyso xiriirka rasmiga ah ee lagu galo bogga Beeraha Jaamacadda Beeraha, markaa waxaad ku jirtaa bogga saxda ah. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa barta internetka ee FUNAAB. Bogga waxaad ku sameyn kartaa howlo sida: hubinta sida natiijooyinka, u bixiso khidmadaha iskuulka, […]
OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Hubi Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa
XIDHIIDHKA Poly Polyfares: Sida arday ah OFFA polytechnic, macluumaadkan ayaa adiga xiiso kuu yeelan doona. Waxaa jira xariir gaar ah oo loogu talagalay ardayda dhigata OFFA Poly. Boggan dhexdiisa, waxqabadyo badan oo tacliimeed ayaa lagu fulin karaa si fudud. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad ka akhriso qodobkan si aad wax badan uga barato sida […]
100+ Erayo Qosol Leh Malaha Ma ogid inay kaa Qosli doonaan
Erayada qosolka leh waa lagu madadaalo in la dhaho. Markaad ka fikirto, ereyada qaarkood ee luqadda Ingiriisiga waxay u muuqan karaan kuwo xiiso leh. Markaynu nidhaahno "xiiso leh" runti waxaan ula jeednaa qariib iyo wacky. Laakiin haye, taasi waa waxa iyaga ka dhigaya madadaalo, sax? Ereyo Qosol badan Kani waa ururinta ereyo qosol badan iyo macnahooda. Ku rid iyaga […]
Sida looga takhalusayo Jiirka guriga si wax ku ool ah oo ku filan
Waxa xiisaha lihi, waxyaabaha ugu yar uguna yar ee noloshan noo sababi kara dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka ugu badan. Waxay u egtahay murugo in laga fikiro in noolaha daqiiqadaha qaar sida jiirka ay soo jiidan karaan wax badan oo feejignaan ah oo xitaa sababi kara buuq badan. Tiro aan la qiyaasi karin oo dad ah ayaa weydiiyay sida looga takhaluso jiirka […]
Nuux Name Meaning, Asal, caan iyo Magacyo la mid ah
Ma u raadineysaa magac casri ah wiilkaaga yar? Nuux wuxuu noqon karaa midka saxda ah ee adiga kugu habboon. Aynu eegno Magaca Nuux Micnaha, Asalka, iyo Caannimada iyo haddii ay tahay magaca saxda ah ee ilmahaaga cunugga ah. Magaca Nuux asal ahaan waa magac lab oo asal ahaan ka soo jeeda Cibraaniga oo macnaheedu yahay Nasasho. Ugu horreyn waa […]
Xariirka Shaqaalaha BLW www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa
Xariirka Shaqaalaha BLW: Ma iskudayeysaa inaad gasho Xariirka Shaqaalaha BLW? Habka ugu fudud ee taas loo samayn karaa waa in la isticmaalo xiriiriyeyaasha rasmiga ah ee hoos ku qoran. Waxaan xiriirinaa dhammaan xiriiriyeyaasha wakhti kasta. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad gasho Xariirka Shaqaalaha ee BLW, markaa waxaa jira hab aad u fudud […]
Xaqiiqooyinka Madadaalo ee Aniga Ku Saabsan: Haddii aad samayn lahayd liistada "xaqiiqooyinka xiisaha leh ee aniga igu saabsan," maxaad ku dari lahayd? Waan ogahay waxa ay dareemeyso marka lagu weydiiyo inaad u sheegto xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan naftaada. Marar badan ayaad ku jahwareertaa waxyaabaha aad dhihi karto si aad xukun uga sameysato naftaada. Gudaha […]
Sida Loo Dajiyo Ganacsi Guul Ah Oo Gaadhay Faa’iido Wanaagsan
Ganacsiga Gaadiidka: Ma dooneysaa inaad lacag ka sameyso daabulidda dadka iyo badeecadaha hal meel u socda? Hadday haa tahay, qodobkan ayaa kugu hagi doona sida loo bilaabo ganacsi gaadiid. Bilaabida ganacsi gaadiid waxay kaaga baahan tahay inaad go aansato nooca ganacsi ee aad damacsan tahay inaad abuurto, oo ay ku jiraan kirada baaskiilka, adeegga taksiga,
Qiimeynta App-ka Macallimiinta 2021: 10 Barnaamijyada Abaalmarinta Abaalmarinta ee Macallimiinta
Qiimeynta App ee Macallimiinta: Kororka tiknoolajiyada moobiilka ayaa runtii kiciyay barasho iyo barasho kacaan aan horay loo arag. Teknolojiyadaha moobiillada ayaa baabi'iyay xudduudaha, waxay fureen fursado waxbarasho oo cusub, iyo, tan ugu muhiimsan, waxay kala dheereeyeen fursadaha barashada oo ay ku jiraan meesha bannaan. Tan waxay ku imaanaysaa dabacsanaan iyo sidoo kale dheecaan ku saabsan dhaq dhaqaaqa ku-meel-gaadhka ah ee ku xeeran barashada. Sida […]
Filed in Articles by TMLTStaff Juun 18, 2021
Darajooyinka Milatariga ee Nigeria waa astaamaha militari ee ay adeegsadaan Ciidamada Qalabka Sida ee Nigeria. Hoos waxaa ku yaal liiska dhammaan Darajooyinka Ciidamada Nigerian siday u kala horreeyaan. Darajaynta ciidanku waxay ka kooban tahay ama loo qaybiyaa laba qaybood, Saraakiisha Komishanka iyo kuwa aan la magacaabin. Qeyb kasta oo adeeg ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Nayjeeriya waxay leedahay astaan ​​la xiriirta oo lagu yaqaan. […]
Filed in Articles by Shaqaalaha tifaftirka Juun 18, 2021	• 0 Comments